साम्राज्ञीको प्रेममा चोर पुलिस खेल – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityसाम्राज्ञीको प्रेममा चोर पुलिस खेल
साम्राज्ञीको प्रेममा चोर पुलिस खेल
December 12, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट-अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई पाँच वटा फिल्म खेल्दा नै संचारमाध्यमले जुन उचाई दिएको छ, त्यो उचाई सायदै अरु अभिनेत्रीले पाएका होलान् । साम्राज्ञीलाई नेपाली संचारमाध्यमले पहिलो फिल्म ड्रिम्समा काम गर्दादेखि नै हो स्टारको उपमा भिराइदिएको ।
यसपछि भने साम्राज्ञीलाई लिएर समाचार र हेडलाइन्स प्रशस्त बनेका छन् । यस्तो कभरेज अरु अभिनेत्रीका लागि डाहाको बिषय मात्र हो ।
तर, अभिनेत्रीले भने आफ्नो व्यक्तिगत कुरालाई मिडियासँग लुकामारी मात्र खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
उही चोर र पुलिस खेलेको जस्तो लाग्ने । मिडियाले पछ्याइरहने, साम्राज्ञी देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने । साम्राज्ञीको प्रेम जीवन खुलेको छ तर बोलिएको छैन । मयंक खड्कासँगको प्रेमको समयमा पनि साम्राज्ञीले प्रेमलाई नचाहेर खुलाइन् तर बोलिनन् ।
हुनत, उनी आफूले काम गर्न लागेको सिनेमाको हल्ला व्यक्तिगत खबरले नछोपोस् भन्ने पनि चाहन्छिन् होली । तर, पनि साम्राज्ञीको स्वभाव भने देखाएर पनि लुकाउन खोज्ने जस्तो छ । अहिले उनी उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाका छोरा देवांश जंगबहादुर राणाको प्रेममा छिन् । उनका लागि देवांशसँगको प्रेम खुलेको किताब जस्तो पनि छ, फेरि उनी खै किन ढाक्न पनि छोप्छिन् ।
प्रेमीसँग उनकै घरमा साम्राज्ञीले जन्मदिन मनाएको भिडियो संचारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आएकै थियो । तर, पनि उनी बोल्दिनन् । उनले अभिनय गर्न लागेको नयाँ सिनेमा मारुनीको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनी प्रेमीको साथमा नै पुगेकी थिइन् । साथै पुगेका यी दुइले एक अर्कालाई भने नयाँ मान्छेको जस्तो व्यवहार गरे । क्यामेराको अघि लुकाएपनि वास्तविकता त सबैलाई थाहा नै छ ।
क्यामेराकाृे अघि त यी दुइलाई पर्न नै मन लागेन । संचारकर्मीको आग्रहमा पनि एकै ठाउँमा उभिएर पोज दिन दुइलाई गाह्रो भयो ।
एकसाथ पुगेपछि जोकोहीलाई पनि प्रेम छ भन्ने थाहा थियो । तर, जाने बेलामा झनै तमसा । उनी र देवांशलाई संचारमाध्यमसँग के डर लागेको हो कुन्नी ।
क्यामेरामा परिन्छ भनेर एकजना गाडीमा जाने, अर्को बाटोसम्म स्कुटीमा पुग्ने । यस्तो तमासा अरु कहाँ देखिएको होला र ? क्यामेरा छलियो भन्ने जस्तो लागेपछि भने फेरि एउटै गाडीमा हुँइकिने ।
जे भएपनि साम्राज्ञी र उनका प्रेमी देवांशले प्रेम नुखलाएर नै संचारमाध्यममा लाइमलाइट बटुलेका छन् । तर, यसरी प्रेमी देखाउन पनि खोज्ने, लुकाउन पनि खोज्ने खेलमा रमाउँदा साम्राज्ञीको कामको हल्ला संचारमाध्यममा कम हुने डर छ । कार्यक्रममा लिएरै पुगेपछि फोटो खिच्न र प्रेमी हुन् भन्न किन डर लागेको होला ?
यो पनि पढनुहोस्;
आमिर खान हुन खोज्ने कि बन्ने पनि ?
latest kollywood gossip
samragee rl shah
samragee rl shah new boyfriend
[yotuwp type=”playlist” id=”UUAqc7EsDfuWb29hao5wN4nA” ]
साम्राज्ञी, पुष्पल र रेविकाको ‘मारुनी’को औपचारिक घोषणा
‘चौका दाउ’को ट्रेलरमा वर्षा सँग रबिन्द्र, विल्सन, सन्तोष र तैयबको रासलिला
January 7, 2019 Tulasa Karki blog, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली फिल्ममा चलेका कति कलाकार अहिले यो क्षेत्रमा छैनन् होला । नाम लिने हो भने लामो कथा बन्छ । किनकी, नेपाल भित्रै हराएका कलाकारको संख्या नै प्रशस्त छ । अमेरिका र अन्य देशमा […]
साम्राज्ञीले फिल्म छाड्दा फाइदा कसलाई ?
October 28, 2018 Laxman Raj Sitaula Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – एउटै समयमा जति फिल्मको अफर आएपनि काम गर्ने हिरोइन पनि नेपालमा छन् । बिहान र बेलुकाको सेड्यूल मिलाएरै भएपनि उनीहरु काम गरिदिन्छन् । कोही कलाकारलाई त आफूले कुन सिनेमामा काम गरिरहेको छु […]
घमण्डले चकनाचुर भएको कलाकारको करिअर
January 9, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- चरित्र अभिनेता कामेश्वर चौरासियाको बारेमा एउटा खबर आउन थालेको छ । कामेश्वर चौरासिया अहिले काम नपाएर छटपटिएका छन् । उनले नयाँ सिनेमा नपाएको ९ महिना भैसक्यो । कोठा भाडा तिर्न पनि समस्या छ […]
हिन्दि गीतमा नेपाली मोडल
सुनिल गिरी भन्छन: ख्याल गर है ‘सोल्टिनी’
सबै कलाकारहरुलाई एक पटक फिल्म निर्माण गर्न दीपशिखाको अनुरोध
समर लभ हेरौ थाइल्याण्ड घुमौ
फिल्म चलेर मात्र होइन, हलमा रिलिज नै नभएर पनि डुब्छन् निर्माता
नायिका ऋचा शर्मा नर्भिक अस्पतालको आइसियूमा
दोस्रो नेपाल अन्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल हुँदै
‘प्रेम लिलि’को ट्रेलर सार्वजनिक
प्रथम‘एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७५’ माघमा हुँदै
aanchal sharma anmol kc barsha raut celebrity gossip dashain celebration dashain tika deepa shree niraula gossip kollywood gossip nepali actress Nepal Idol nepali film nepali heroine New Nepali Movie Paul Shah Pooja Sharma pradeep khadka prem Geet2Priyanka Karki samragee rl shah Samragyee Rl Shah saugat malla Shweta Khadka Surakshya Panta Swastima Khadka
Copyright © 2010-2018 Sutra Entertainment Pvt. Ltd. All Right Reserved. Designed by: Ennovative Web Design